Ny 24 Infinity Tattoos ny tetikasam-pahaizana tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-pankasitrahana
Ny tanjona 24 Infinity Tattoos tsara indrindra ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Aogositra 3, 2016
Rehefa misy tatoazy, dia misy tetikasa an-jatony mifidy. Tsy misy zavaboary na endrika izay tsy hitantsika teo amin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Ny dikan'ny Infinity Tattoo
Ny tati-boninahitra tsy manan-tsiny dia tena eo amin'ny lafiny malaza noho ny dikany eo amin'ny latabatra. Ny tatoazy dia maneho ny isa 8 ary manana ny fehezan-teny manokana tsy misy fiafarany izay nahatonga izany ho an'ny olona rehetra te-hankasitraka sy hifaneraserany. Ny fahafahana tsy manam-petra izay asehon'ilay tatoazy dia ny tianao horesahina amin'izany. Io dia maneho ny fahaterahana indray na ny fahaterahana indray amin'ny kolontsaina sasany.
Ny tatoazy dia azo atao amin'ny endriny maro ho toy ny fiainana, ny fisakaizana na ny fitiavana mihitsy aza. Ny tatoazy dia maneho ny fo na eny amin'ny kintana. Ny tatoazy #infinity dia zavatra iray mety azonao ampiasaina amin'ny fitondrana izany hafatra mahery izay mitaky amin'ny vahoaka izany.
Tsy misy olona manao izany tsara kokoa rehefa tonga amin'ny tati-tarehy Infinity. Ny fomba nanamboarana azy sy ny fanehoana ny fandalinana matematika izay miresaka momba azy. Ny infinity #tattoo dia nanjary karazana hafatra manokana izay na dia tian'ny lehilahy aza ny miteny amin'ny mpiara-miombon'izy ireo ny fanapahan-kevitr'izy ireo ho tsara kokoa noho ny teo aloha. Ny tati-tarehimarika infinity dia tonga amin'ny endrika sy ny endriny samihafa. Ny dikany dia mety hivoatra bebe kokoa rehefa ampiana zavatra hafa mba hahatonga azy io ho tokana sy mahagaga.
1. Finger infinity tattoo ink ho an'ny rehetra
Ny tatoazy maharitra dia mety mihena tsikelikely amin'ny fahanterana, saingy mety tsy hiala amin'ny vatany izy afa-tsy amin'ny fanovana hafa. Azo ampiasaina ny fitsaboana laser fa ny fanaintainana misy ifandraisany amin'ny dingana dia manala baraka.
2. Tolo-tànana tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy manana hafatra manokana
Izany no antony mahatonga ny olona hatahotra ny hanao an'ity karazana tatoazy tsy misy farany ity. Ny lafo kokoa amin'ny fanaovana izany dia lafo ihany koa izay tsy fahampiana.
3. Fomba amin'ny totozy momba ny tati-baventy amin'ny anarana amin'ny ankizivavy
Azo atao tsinontsina ny tatoazy tsy fahita firy. Ny pigment dia mipetaka eo amin'ny saron'ny hoditra ivelany izay mamela fotsiny ny epidermis miloko. Tokony ho fantatrao fa mety ho very ny selan'ny hodiny ianao raha esorina.
4. Fanantenana sy tombo-kase tato ho an'ny ankizivavy amin'ny tanany
Aza manahy momba ireo sela hoditra very, satria mety hiverina ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo. Raha mieritreritra ny hahazo an'io tatoazy tsy manam-pahataperana io ianao nefa tsy azonao antoka raha toa ka mety ho tianao ny ho ela, dia mandehana amin'ny famolavolana vonjimaika.
5. Lolo vavy tato ho an'ny totozy ho an'ny vehivavy eo amin'ny tanany
Ny vokatra vokatry ny tatoazy tsy manam-paharoa dia tsy misy ohatr'ireo tatoazy tsy manam-pahataperana izay maka fotoana hanasitranana aorian'ny fanovana. Tsy tokony ho maimaika ny hahazoana tato ho ato amin'ny tara-pahazavana raha toa ka manan-kery ianao momba ny famolavolana.
6. Fomba amin'ny totozy tato ho ato amin'ny tattoo miaraka amin'ny hafatra ho an'ny tovovavy
Ity tontolon'ny tsangambato ity dia novolavolain'ny artista mahay iray izay nanao asa mahavariana miaraka amin'ny hevitry ny mpampiasa.
7. Fitiavam-pitiavana tato ho an'ny vehivavy
Tsy hahatsapa fanaintainana ianao raha fanoloana vonjimaika. Na dia izany aza, ho an'ireo izay maniry ny hahazo tatoazy tsy misy farany izay haharitra mandrakizay, tokony ho vonona hiaritra fanaintainana ianao mandritra ny fanesorana azy.
8. Teboka mitovitovy amin'ny tattoo amin'ny hafatra, Tiako i Jacob ho an'ny zazavavy
Adinoy ny fahaverezan'ny ra raha tonga amin'ny #design temporaly izy io fa tsy toy ny tatoazy vita amin'ny tato ho ato.
9. Fihetseham-po mahatsikaiky momba ny fitaovam-piadiana amin'ny zazavavy
Nandritra ny taona maro, hitantsika fa ny olona dia manaiky ny tontolon'ny tara-pahazavana noho ny hatsaran-tarehy eo amin'ny hoditra. Misy karazana samihafa izay misy tatoazy tsy misy farany.
10. Tonta tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny hafatra
Azonao atao ny manova na manova ny fomba fijery ny tatoazy tsy misy farany. Misy ny olona maniry ny hampifanaraka ny tontolon'ny tarehimarika tsy hita maso mba hijery amin'ny hafa.
11. Tetikasa tsotra momba ny tati-tsavily ho an'ny vehivavy any aoriana
Ny tontolon'ny Infinity dia nanjary lozam-pifanosana izay mety tsy hivoatra mandritra ny taona maro. Ny anton'izany dia noho ny fisian'ny olona mamorona zavakanto mahavariana. Azonao atao ny manampy loko na manodinkodina ny endriky ny tattoo anao.
12. Ankle infinity tattoo ink tononkira ho an'ny vehivavy
13. Ny vorona mpirenireny sy ny tapa-kofehy amin'ny endriky ny tattoo dia mamorona hevitra ho an'ny zazavavy any aoriana
Azonao atao ny manapa-kevitra ny hanana karazana tatoazy araka izay azonao ambara. Mety tantara, lesona na fampahatsiahivana ny zavatra tsy tianao hanadinoana mihitsy. loharanon-tsary
14. Ankafizo ny rantsan-tongotra amin'ny endriny tattoo ao anaty tato
Rehefa tonga amin'ny fisafidianana ireo tatoazy tahaka izao, dia mitaky fiomanana maro mba hahatonga anao ho zavatra mahafinaritra toy ity tattoos famantarana an'ohatra ity. loharanon-tsary
15. Ny volo sy ny infinity dia mamela tato ho an'ny ankizivavy
Ny tontolon'ny tsy manam-petra dia midika hoe fitomboana tsy mitsaha-mitombo izay azo ampiasaina hiresahana ny loop tsy misy farany na ny isa, 8. loharanon-tsary
16. Tadiavo ho an'ny ankizivavy ny tati-baventy
Lasa lamaody io tatoazy io satria na dia ny mpivady aza no mampiasa azy ireo. Matetika ny olona no mampiasa fo na naingoina akaikin'ny tatoazy tsy manam-paharoa mba hanehoana ny fitiavany. loharanon-tsary
17. Teboka amin'ny tavoahangy ankapobeny ny tato an-tsoratra amin'ny ankizivavy
Ny marika infinity dia mety tsy ampiasaina amin'ny mpivady afa-tsy amin'ny olona mino ny tsy mety. Miaraka amin'ireny tatoazy ireny, azo atao ny zavatra rehetra. loharanon-tsary
18. Ny fo amam-batan'olona sy ny tebiteby tsy mety amin'ny lehilahy eo amin'ny tongotra
Raha mieritreritra ny hahazo zavatra izay tsy mahazo ny ankamaroan'ny olona na manandrana mitandrina na inona na inona ianao, mandehana ho an'ity tatoazy ity. Izany no mahatonga ny tatoazy ho malaza amin'izao fotoana izao. loharanon-tsary
19. Ny vorona mandositra sy ny tsy fisian'ny tato anaty tato ho an'ny vehivavy
Ho an'ny vehivavy, tsy azo tsinontsinoavina ity tatoazy ity noho ny hatsaran'ny tarehiny. Azonao atao ny mamorona zavaboary na enti-mody miaraka amin'ireo teny ao aminy. loharanon-tsary
20. Ankafizin'ny ankamaroan'ny tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy
Ny ankamaroan'ny mpivady dia ho tia izany. Mampihetsi-po ny fampiasana ny fitiavana amam-pitiavana ary ny fomba ambaran'ny teny hoe tatoazy. Ianao no ilay mifidy izay tianao hananana tatoazy manokana. loharanon-tsary
21. Tadiavin'ny vorona feno tato anaty tato an-tonta miaraka amin'ny hafatra
Ao ambadika, ny tontolon'ny tavy dia azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'olona. Nampiasa izany izy ireo mba hamehy toy ny anabavy. Tsy misy na inona na inona izay manakana anao tsy hamorona zavaboary mahafinaritra amin'ny endriny manokana. loharanon-tsary
22. Toto tsy misy tato ho an'ny tatoazy #idea ho an'ny rehetra
Afaka mahazo tsara kokoa izy io rehefa tonga amin'ny tatoazy tsy manam-paharoa amin'ny elatrao. Ny fijery azy sy ny fomba nampiasana ireo teny sy vorona mba hanomezana hafatra manokana dia mampiavaka azy. Afaka manoratra teny mahafinaritra ianao izay hanentana anao hanao tsara kokoa ny tatoazy. Mazava ho azy, dia hita fa tena vakina aminao izany. loharanon-tsary
23. Ny vorona mivelatra sy ny tsy fahampian-tsasatra dia lasa tato ho an'ny vehivavy
Angamba, ny ambiny dia afaka manome anao izany drafitra izany izay tena ankasitrahana anao. loharanon-tsary
24. Tetikasa mahafatifaty mavomavo amin'ny endriny malaza amin'ny tànan'ilay ankizivavy
Na ny sandry izay misy ny tontolon'ny tatoazy dia mamaritra anjara manokana. loharanon-tsary
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa ny Tattoo Design Tattoo
tato ho an'ny vatofantsikaTattoo Feathertattoos voronafitiavana tatoazycat tattoosmehndi designtatoazy fokotattoo infinityarrow tattootattoosdiamondra tattootattoos foottattoos armtattoos crosstattoos sleevetatoazy ho an'ny zazavavytattoos rahavavyrip tattoosmozika tatoazymasoandro tatoazytattoos ho an'ny lehilahytatoazy voninkazoHeart Tattoostattoo watercolorNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo cherry blossomraozy tatoazytatoazy loloanjely tattoostattoo octopusmoon tattooselefanta tatoazykoi fish tattootanana tatoazytattoos mahafatifatynamana tattoos tsara indrindrahenna tattooscorpion tattooeagle tattoostattoos mpivadytattoo eyeAnkle Tattoostattoo ideasloto voninkazocompass tattootattoos backtattoosTatoazy ara-jeometrikatratra tatoazylion tattoos